Imishini Yokwakha, Izingxenye ze-VOLVO - Fangzheng
Izingxenye Zokumboza Umzimba
Izingxenye zomzimba nezinsiza
Izingxenye Zokuhambisa Amandla
ethengisa kakhulu i-digger Crawler Excavator entsha
ton excavator intengo excavator intengo excavator EE6460FF
32ton abakhasi Excavator SY265CLR ibhakede Excavat ...
6ton isondo Excavator SY65W ibhakede Excavator for ...
9ton abakhasi Excavator SY80U multi-purposer Ex ...
14ton abakhasi Excavator SY135C multi-purposer ...
I-6ton ssy65w China Intengo Yesikebhe Esisanda Kamasondo Esisha
I-Crawler Excavator SY155U (T4f) entsha
I-Xuzhou iyindawo ebalulekile yezokuthutha nenhlokodolobha yemishini yokwakha eneminyaka engama-6000 yentuthuko ephucukile eChina. I-Caterpillar imele amabhizinisi axhaswa amazwe. Ngaphansi kweqembu le-XCMG, iXuzhou Fangzheng Construction Machinery Co., Ltd izomela amabhizinisi aseChina avelele kanye nomhlinzeki wesevisi wobuchwepheshe obuchwepheshe weVolvo Construction Equipment ne-Engine.
IVOLVO UKWAKHIWA KWEZINTO ...
NgoDisemba 23, 2020, iyunithi lama-40,000th elakhiqizwa yifektri yaseShanghai yeVolvo Construction Equipment yasuka ngokusemthethweni kulayini womhlangano, okufaka elinye igxathu elikhulu leVolvo Construction Equipment eChina iminyaka engu-18. Ithimba labaphathi beVolvo CE China, abamele abasebenzi kanye ...
KUSUKA KWIDATHA ELIKHULU LE-TIEJIA KUSE S ...
Eminyakeni yakamuva, umkhiqizo we-excavator waseChina uhlangabezane nokukhula kwe-blowout, futhi impi yesabelo semakethe isiqalile. Ngokuya ngemininingwane yokuthengisa ye-excavator ye-China Construction Machinery Industry Association, isabelo semakethe yomkhiqizo we-excavator wasekhaya ngo-2019 sasiphezulu ...
UMBUTHO OQINILE, IVOLVO IQHUBEKA NE ...
NgoDisemba 10th, uLi Qianjin, umphathi jikelele weXCMG Fire Safety Equipment Co., Ltd. (kamuva ezobizwa ngeXCMG Fire Protection), noDong Chenrui, umongameli weVolvo Trucks China (ngemuva kwalokhu ebizwa ngeVolvo Trucks), basayine isu isivumelwano sokubambisana eXuzhou. Lokhu kusho ukuthi ...